Igumbi leendwendwe elitofotofo + negumbi lokuhlambela kwindlu ekwisixeko esiyihafu - I-Airbnb
Igumbi leendwendwe elitofotofo + negumbi lokuhlambela kwindlu ekwisixeko esiyihafu
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguFranziska
Igumbi leendwendwe elipholileyo elinefriji kunye neendawo zokupheka ezincinci kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawari, kwindlu enamaplanga embindini weMarburg. Ifakwe kufutshane neCawe kaElizabeth eKetzerbach, apho kukho iindawo zokutyela ezininzi ezincinci kunye neevenkile. Isikhululo sebhasi siphambi kwendlu kwaye ivenkile enkulu ijongene ngqo. Mna nomyeni wam sisibini saseKhanada-esiJamani, ngoko sobabini sithetha kakuhle IsiNgesi :)!
Igumbi elinayo yonke into oyifunayo kunye negumbi lokuhlambela elincinci elisecaleni. I-Ebrne yonke kumgangatho ophantsi uhlala nguwe kuphela (sinokuthi singene kuphela xa singena kwaye siphuma endlwini). Emva kwendlu kukho intendelezo encinci enendawo yokuhlala kunye nokufikelela kwigadi encinci.
Ivenkile enkulu, zokutyela, Elisabeth Church, Oberstadt (kunye neevenkile ezingakumbi kunye nemivalo/iindawo zokutyela), ilayibrari yaseyunivesithi, isakhiwo esikhulu seyunivesithi, Cineplex, Erwin Piscator House, njl. Yonke into inokufikelelwa ngeenyawo kwimizuzu nje engaphezu kwemi-5.
Ukuba unemibuzo malunga nokubona, ukuphuma, ukuthenga, njl., Ndiyavuya ukuba ube khona kuwe ngeSMS okanye kumntu, ndihlala endlwini :).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marburg